Antanimora : Gadra telo tafatsoaka -
AccueilSongandinaAntanimora : Gadra telo tafatsoaka
Antanimora : Gadra telo tafatsoaka
Nisehoana fahavakisana indray teny amin’ny fonjan’Antanimora ny alin’ny sabotsy lasa teo , tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany tany ho any ka gadra telo no indray tafaporitsaka. Rafalimanana Nirina Dominique, izay efa voafonja tamin’ny 11 aogositra 2012, ary voaheloka higadra mandra-pahafaty noho ny resaka fanaovana vola sandoka ny voalohany. Rakotoarisoa Henintsoa Raphalk, voafonja ny 17 martsa 2009 ary voampanga hisazy mandritra ny 15 taona noho ny halatra miaro vonoan’olona. Raharijaona Solofoniaina kosa ny fanintelony, izay gadra nampidirina am-ponja vonjimaika ny 05 aprily 2017 noho ny resaka fanolanana, ary mbola eo am-piandrasana ny fotoam-pitsarana azy ity farany izao nanao fandikan-dalàna izao. Araka ny loharanom-baovao avy amin’ny talen’ny serasera eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsaràna, Jeremy Napouh, dia teo amin’ny varavarankely ireto voafonja ireto no nivoaka. “Tsy nisy vaky ny rindrina na ny varavarana fa natao izay nahabiloka ny vy teo amin’ny varavarankely, ary teo izy ireo no nivoaka. Lamba no notohizana ary nitsambikinan’izy telolahy ireo teo amin’ny tamboho tao ambadika”, hoy ny fanampim-panazavan’ity tompon’andraikitra ity. Raha ny voalaza hatrany moa, dia tao amin’ny “quartier”A, tao amin’ny efintrano A1 no nisehoan’io zavatra io , ary “Chef de poste” nanao fisafoana no nahatsikaritra izany. “Raha taraiky sy nisy elanelana ny fandalovan’io mpiambina io, dia mety efa mihoatra ny telo no tafatsoaka . Azo heverina mantsy hoe vao lasa mihitsy izy ireo no nanao fisafoana io mpiambina io”, hoy hatrany ny voalaza.
Araka ny nambaran’ity talen’ny serasera eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana ity, dia azo heverina ho nisy firaisana tsikombakomba teo amin’ireo samy voafonja tao anatin’io efitrano A1 io, satria dia tsy tokony hahavita hanabiloka ireo vy ireo mihitsy raha izy telolahy irery. Nolazainy ihany koa fa tsy nandrenesana tabataba na horakoraka teny an-toerana . Raha ny salan’isa voaray, dia miisa 168 no gadra ao anatin’io efitrano nisehoan’ny fandosirana io, raha toa ka 457 no fitambaran’ireo voafonja ao anatin’io “quartier” A, izay efa mihoatra lavitra amin’ny tokony ho izy. Ankoatra izay fahamaroan’ireo gadra izay nifanampy tamin’ny fikononkononana izao asa ratsy izao moa, dia nolazain’ity tompon’andraikitra ity ihany koa, fa noho ny tsy fahampian’ireo mpiambina izay roa fotsiny ihany , sy noho ny fahanteran’ny fotodrafitrasa ao amin’ity fonja ity no isan’ny nanamora ny fitsoahan’ireo voafonja ireo. Niditra an-tsehatra tamin’ny fikarohana ny manodidina rehetra ireo mpandraharahan’ny fonja vantany vao niseho ity fandosirana gadra ity, saingy tsy hita popoka intsony izy telolahy ireo. Manoloana ny zava-nisy amin’izao fotoana izao sy ny zava-nitranga teo aloha moa, dia nitaraina ireo mpitandro filaminana noho ny fahataran’ny fampandrenesana azy ireo, izay isan’ny mahasarotra ny fikarohana sy ny fisamborana. Omaly antoandro no nivoaka ny taratasy fampikarohana ireo gadra telolahy ireo, izay efa naparitaka manerana ireo biraon’ny manam-pahefana.
Nanomboka nampahafantarin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny sabotsy lasa teo ny fisian’ny fandaharana manokana antsoina hoe fotoam-bita, fandaharana izay hiresahana isan-kerinandro ny raharaha izay misy eto amin’ny firenena. Ny fampiasana ny teknolojia izay misy amin’izao fotoana ...Tohiny